အကြင်နာနန်းတော်: Gmail Account Locked ကျသွားသူများအတွက်ပါ။
ညီမလေးတစ်ယောက် က အကူအညီတောင်းလို့ပါ။ သူ့ gmail account locked ကျသွားလို့ဆိုပြီး
ဖုန်းဆက်မေးတာနဲ့ ..လုပ်နည်းလေး ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်.
ဒီနေရာ လေးကို ကလစ်ပေးပါ။
ပြီးရင် အောက်က ပုံလေးအတိုင်း လိုအပ်တာဖြည့်ပေးပြီး Unlock ကလစ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
နောက်တစ်နည်းက ကိုယ်ဝင်ထားတဲ့ မေးလ်အကောင့် ဘားတန်းလေးမှာ
ဥပမာ.(https://mail.google.com/mail/?..............................) s ထည့်ပေးပြီးEnter ပြန်ခေါက်ရင်လည်းရပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက google ကနေ ဖုန်းနံပါတ်တို့ မေးလ်လိပ်စာတို့တောင်းတဲ့ လင့်ခ်လေးကျလာရင် မထည့်ပဲနဲ့
မော်စီလာဘားတန်းအပေါ်က Reload currend page ကို ကလစ်ပြန်ပေးလိုက်ပါ။
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Sunday, March 13, 2011